12 Tips to Troubleshoot Your Internet Connection - 7
7.9.2020 | 12 Tips to Troubleshoot Your Internet Connection - 7
၇။ ပိုကောင်းတဲ့ signal ရအောင်လုပ်လိုက်ပါ။
အကယ်၍ သင်ဟာ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုနေပါက သင့်ရဲ့ connection ကို နှေးကွေးစေမယ့် ပြဿနာများစွာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကွန်ပြူတာကို Ethernet cable ကနေတဆင့် router နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ဒီအချက်ကသင့်ထံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်ပါက သင့်ရဲ့ Wi-Fi signal ဟာ သင့်အင်တာနက်မြန်နှုန်းကိုလျော့နည်းစေတဲ့ အထိ နည်းပါးနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ Wi-Fi icon လေးကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ - ဘားတန်းဘယ်နှစ်ဘားလောက်များရှိနေပါသလဲ?
အကယ်၍ သင့် Wi-Fi icon ပေါ်တွင် ဘားများနည်းနေပါက သင့်ရဲ့ router ကို သင့်အိမ်ရဲ့ အချက်အခြာကျတဲ့နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါမယ် (ဒါမှမဟုတ်) Wi-Fi extender တစ်ခုကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ (သင့်ထံတွင် Wi-Fi extender ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါက ဒီ Wi-Fi extender က အရည်အသွေးမကောင်းတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Mesh system တစ်ခုဟာ ပိုပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်)။
အကယ်၍ သင့် Wi-Fi icon ဟာ ဘားအပြည့်ရှိနေပါသော်လည်း သင်နေထိုင်ရာအဆောက်အအုံ အတွင်း များစွာသော Wi-Fi ကွန်ယက်များရှိနေပါက အရမ်းကြပ်တည်းသိပ်သည်းနေနိုင်ကာ Channel ကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) 5GHz band ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင် ပါတယ်။ လိုင်းဆွဲအားဖမ်းယူရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချက်များကိုသိရှိရန် အတွက် Wi-Fi signal များကိုတိုးမြှင့်နိုင်စေမည့် နည်းစနစ်များအကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်များကိုဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါ။
၇။ ပိုကောငျးတဲ့ signal ရအောငျလုပျလိုကျပါ။
အကယျ၍ သငျဟာ Wi-Fi ကိုအသုံးပွုနပေါက သင့ျရဲ့ connection ကို နှေးကှေးစမေယ့ျ ပွူနာမြားစှာရှိနနေိုငျပါတယျ။ သင့ျကှနျပွူတာကို Ethernet cable ကနတေဆင့ျ router နဲ့ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျကွည့ျလိုကျပါ။ အကယျ၍ ဒီအခကြျကသင့ျထံတှငျဖွဈပေါျနတေဲ့ပွူနာကို ဖွရှေငျးပေးလိုကျနိုငျပါက သင့ျရဲ့ Wi-Fi signal ဟာ သင့ျအငျတာနကျမွနျနှုနျးကိုလြော့နညျးစတေဲ့ အထိ နညျးပါးနတောဖွဈနိုငျပါတယျ။ သင့ျကှနျပွူတာပေါျရှိ Wi-Fi icon လေးကို စဈဆေးကွည့ျလိုကျပါ - ဘားတနျးဘယျနှဈဘားလောကျမြားရှိနပေါသလဲ?
အကယျ၍ သင့ျ Wi-Fi icon ပေါျတှငျ ဘားမြားနညျးနပေါက သင့ျရဲ့ router ကို သင့ျအိမျရဲ့ အခကြျအခွာကတြဲ့နရောသို့ ပွောငျးရှှေ့ပေးဖို့လိုအပျပါမယျ (ဒါမှမဟုတျ) Wi-Fi extender တဈခုကို ဝယျယူနိုငျပါတယျ။ (သင့ျထံတှငျ Wi-Fi extender ရှိနပွေီးသားဖွဈပါက ဒီ Wi-Fi extender က အရညျအသှေးမကောငျးတာလဲဖွဈနိုငျပါတယျ။ Mesh system တဈခုဟာ ပိုပွီးကောငျးမှနျစှာအလုပျလုပျပေးနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ)။
အကယျ၍ သင့ျ Wi-Fi icon ဟာ ဘားအပွည့ျရှိနပေါသောျလညျး သငျနထေိုငျရာအဆောကျအအုံ အတှငျး မြားစှာသော Wi-Fi ကှနျယကျမြားရှိနပေါက အရမျးကွပျတညျးသိပျသညျးနနေိုငျကာ Channel ကိုပွောငျးလဲခွငျး (သို့) 5GHz band ကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွင့ျ ထိုပွူနာကိုဖွရှေငျးနိုငျ ပါတယျ။ လိုငျးဆှဲအားဖမျးယူရာတှငျပိုမိုကောငျးမှနျစရေနျလုပျဆောငျနိုငျသည့ျအခကြျမြားကိုသိရှိရနျ အတှကျ Wi-Fi signal မြားကိုတိုးမွှင့ျနိုငျစမေည့ျ နညျးစနဈမြားအကွောငျးရေးသားဖောျပွထားသည့ျ ကြှနျုပျတို့ရဲ့လမျးညှှနျမြားကိုဖတျရှုကွည့ျလိုကျပါ။